IiMQL ziPasile-Ngaba uyayila iiMQM? | Martech Zone
IiMQL ziPasile- Ngaba uyayila iiMQM?
NgoLwesithathu, Agasti 19, 2020 NgoLwesibini, Agasti 18, 2020 URavi Chalaka
I-MQM yimali entsha yokuthengisa. Iintlanganiso ezifanelekileyo kwezentengiso (MQM) ezinethemba kunye nabathengi baqhuba umjikelo wentengiso ngokukhawuleza kwaye bandise ngcono imibhobho yengeniso. Ukuba awufaki kwikhompyuter kwimayile yokugqibela yamaphulo akho okuthengisa akhokelela kwimpumelelo yabathengi, lixesha lokuba uqwalasele ukuthengiswa kwezinto ezintsha. Sikulungele ukutshintsha umdlalo ukusuka kwihlabathi le-MQLs ukuya kwilizwe apho incoko ilungele ukukhokelela kwimali ephambili yokuthengisa.
Umdlalo awusekho malunga neenombolo kuphela; Indawo yentengiso yanamhlanje imalunga nokubandakanya abathengi ngeendlela ezizezona zakha ukuthembana kwaye ekugqibeleni-ubudlelwane obuqinileyo. Oku kubaluleke ngakumbi ngoku, kwaye ndiyaxela ukuba izakuhlala i-post-COVID, kuba intengiso yedijithali kufuneka iqhube umbhobho wentengiso, isikhombisi esikhokelela ekukhuleni kwengeniso.
Abafundi bale bhlog baya kuyazi kakuhle intengiso kunye nefaneli yokuthengisa, imbonakalo ebonakalayo yalo naliphi na ithemba okanye unxibelelwano lwabathengi kwishishini lakho. Ibonisa ngokucacileyo uhambo olucingelwayo oluthathwa kukungazi nto malunga nenkampani ukuba ibe ngomnye wabathengi bayo abathembekileyo. Ngokulinganayo, inokulandela umkhondo wentengiso enqamlezileyo okanye yokuthengisa kunye neakhawunti esele ikho yemveliso entsha okanye inkonzo. Nokuba sixoxa kangakanani ngokuchaneka nokusebenza kwefaneli, inye into eqinisekileyo: ilapha ukuhlala!
Ukuthengisa okuqhelekileyo kwe-B2B kunye nefaneli yentengiso yenkampani yeshishini kwixesha langaphambi kwe-COVID kubonisiwe kulo mzobo ungentla. Ukuqala ngentla yefaneli, enokuba yimeko yesiqhelo apho unekhulu lamawaka eendwendwe kwiminyhadala yakho okanye kwiwebhusayithi, kunye nethemba ojolise kulo kwimikhankaso yakho yentengiso. Eli linqanaba lokuvelisa ulwazi malunga nethagethi yakho ojolise kuyo. Inkampani inokulindela ngokubanzi iipesenti ezi-5 zokuguqula inqanaba, kulo mzekelo kuya kubangela malunga nama-5,000 XNUMX akhokelayo.
Inyathelo elilandelayo kukufumana amanqaku kunye nokondla ezi zikhokelo kunye nokuziguqula zibe zii-MQLs (isikhokelo esineziqinisekiso zentengiso) esekwe kwinqanaba lomdla okhokelayo obonisiweyo kuhlobo lwethu okanye kwimveliso. Oku kuhlala kuyindawo apho ukuthengisa ngesandla kwenzeka khona, ke ukuthengisa kungazifumana ezi zikhokelo kwaye emva koko kuzitshintshe zibe ngamathuba njengenxalenye yombhobho wentengiso.
Kuninzi lwentengiso ye-B2B kunye nemisebenzi yokuthengisa, i-1% yokukhokela iguqula impumelelo. Kulo mzekelo, ukuqala malunga nama-5,000 50 akhokelayo, umntu angaphela ngeempumelelo ezimalunga nama-XNUMX. Qaphela ukuba le metric inokwahluka kakhulu ngokusekwe kwixabiso lokuthengisa eliphakathi, uhlobo lweshishini, kunye nobude bomjikelo wentengiso.
ICoronavirus Itshintshe iFanele
Ingxaki yobhubhane yangoku ichaphazela onke amabakala kule faneli. Umphezulu wefaneli uya kuncitshiswa kuba ngekhe ubenamawakawaka eendwendwe kwimicimbi yomntu, kwimiboniso yendlela, nakweminye imisebenzi enjalo. Ngokuqinisekileyo oku kunciphisa inani lezikhokelo.
Ngapha koko, i-COVID-19 ichaphazela ukuguqulwa kuyo yonke ifanele. Oku kuyinyani ngakumbi embindini wefaneli apho isibonelelo phakathi kokuthengisa okufanelekileyo okukhokelayo kukhokelo olufanelekileyo lokuthengisa lwenzeka. Kungenxa yokuba kwinqanaba apho uninzi lwethemba kunye nokubandakanyeka kwabathengi kwenzeka-ngakumbi kwishishini le-B2B. Kulapha apho yonke imisitho erhoxisiweyo kunye nemisebenzi inefuthe elibi kunxibelelwano lomntu olubalulekileyo olufunekayo lokuhambisa umkhombandlela ngokusebenzisa ipipi yombhobho yonke indlela yokufumana ithuba lokuthengisa elishushu.
Le yingxaki enkulu kuthi abathengisi. Njengokuba umzobo wesibini wefaneli ubonakalisa, nangona ipesenti yokuguqula ngokusebenzisa ifanele ukuza kuthi ga ngoku ibonakala ngathi yehle ngokuthozamileyo, inani lempumelelo lehla ngokungqalileyo ukusuka kuma-50 ukuya kuma-20. njengoko uqhubela phambili phantsi kwefaneli, nokuba yipesenti encinci yokuhla iya kuba nefuthe elikhulu kwinani lempumelelo.
Guqula iKhokelela ngakumbi kwiWins, ngokukhawuleza
Ukuphendula, amaqela okuthengisa edijithali kumashishini amaninzi aphumeleleyo ngoku ayenyuka kwimidlalo yabo. Bajolise ekuveliseni amakhulu okanye amawaka ee-MQM: iintlanganiso ezifanelekileyo-zentengiso. La maqela agqibe ekubeni akwanelanga ukuhambisa nje i-MLQ. Ngokuqinisekileyo ii-MQLs zisabalulekile, kodwa akunakuphikwa ukuba awunakukwazi ukumisa uhambo lwakho xa uvelisa ii-MQLs kwizikhokelo eziluhlaza. Okufunekayo ziindawo ezenza ukuba unxibelelwano olubaluleke kakhulu nomthengi olubaluleke kakhulu ekufundiseni umthengi, ukuphendula imibuzo, ukuphendula inkcaso, kunye nokulawula uthethathethwano.
Iziganeko ezibonakalayo, ii-webinars, kwaye phantse zonke amaphulo okuvelisa iimfuno ukuqhuba izicwangciso zokubandakanya abathengi ngamathemba afanelekileyo okuqhubela phambili imfundo yabo, ukumiliselwa kwengqwalaselo, kwaye ke abo baqhubele phambili kuhambo lwabo lomthengi. Ngenxa yeso sizathu, ndiza kuthetha ukuba ii-MQM zibaluleke ngakumbi kwi-MQLs kwimozulu yethu yangoku yentengiso.
Ii-MQM zikwahluka kakhulu kuba zinokuchazwa njenge-CTA ebonakalayo (ukubiza isenzo) kuzo zonke iinkqubo zakho zentengiso yedijithali kunye neziganeko ezibonakalayo. Ngaba ngekhe ubenentlanganiso yabathengi ngaphezulu komkhokeli wabathengi?
Iintlanganiso zabaThengi eziSebenzayo zingathatha iifom ezahlukeneyo
Cinga lo mzobo, othi imizekeliso Iindidi ezahlukeneyo zeentlanganiso zabathengi zeB2B esinokuthi ngoku siziphathe phantse.
Ke, ukuba iintlanganiso zabathengi kunye neengcali kunye nabaphathi zibaluleke ngaphezu kwesikhokelo, sinokuzivelisa njani ngakumbi? Kwiimeko eziqhelekileyo, xa abathengi bafuna ukubona idemo, banokuyibona kumnyhadala okanye umboniso wendlela okanye iseshoni yokuphumla. Ngexesha elizayo elibonakalayo, le misebenzi iya kudinga ukubonakala. Kwangokunjalo, ukuba umthengi ucela intlanganiso kunye nentlanganiso yesigqeba esiphezulu ngaphambi kokuzibophelela kuthengiso lwezigidi zeedola, oku kunokulawulwa ngokulula phantse.
Kukwanjalo ke nakwizinto ezijikeleziswa ngamaqabane, abasasazi, kunye nabathengi, nayo nayiphi na imeko apho abantu abaninzi kufuneka babize ukusombulula iingxaki kunye nokuxoxa ngezisombululo. IiWebinars ngoku sesinye sezixhobo esinamandla zokukhawulezisa uhambo lonke lomthengi, kwaye iiseshoni zeengcali zihlala zibalulekile ekuqinisekiseni abathengi ukuba bathuthele kwitekhnoloji entsha okanye isisombululo esitsha. Iintlanganiso zamaqabane nazo ziphambili kwiinkampani ezininzi ukuqhuba ishishini labo. Zonke ezi ntlanganiso ze-B2B zabathengi zicwangcisiwe kwinkampani yakho kwaye zinokuveliswa ngokudibanisa ii-MQM kumanyathelo akho okuthengisa kwidijithali.
Cinga ngendlela Umbutho wakho onokuthi uvelise ngayo ii-MQM
Nantsi eyona nto iphambili: ukuba ufuna ukukhulisa ingeniso yakho, kufuneka ukhule umbhobho wakho. Ukunyuka kwethagethi yengeniso yakho, kokukhona umbhobho owudingayo endaweni yakho - umbhobho wakho sisalathiso esikhokelayo sengeniso (yona sisalathiso esisaleleyo sempumelelo yakho yentengiso).
Indlela eqinisekileyo yokuqikelela ukuba umbhobho wakho ujolise ekwandiseni iintlanganiso zabathengi ze-B2B kunye nolunye unxibelelwano. Ngamanye amagama: ii-MQM ziqhuba imibhobho, ethi yona iqhube ingeniso.
Inkqubo ye-MQM eyimpumelelo iya kuvelisa umthamo omkhulu wezicelo zentlanganiso, kwaye ezi kufuneka zilawulwe ngokusondeleyo kwaye zilandelelwe ukuze zisebenze kwaye zilandelwe. Ukuseta intlanganiso kunye nethemba okanye umthengi kunokufuna uninzi lwee-imeyile ezili-14 kunye neefowuni ukuba ziphathwa ngesandla, ke amashishini azimiseleyo malunga nee-MQMs asebenzisa iqonga le-automation platform (MAP).
By ukongeza i-MAP kwisitaki sakho sobugcisa bokuthengisa Uyakwazi ukukhulisa amandla akho e-MQM kuba iya kuzenzela izinto ezintathu ezizezona zinkulu ngexesha lokucwangciswa: ukucwangciswa kwangaphambi kokuhlangana (cwangcisa ukuseta iintlanganiso zabazimeleyo kwaye uqinisekise ukuba ngamnye unolwazi olufunekayo ukuze intlanganiso iphumelele); ulawulo lokuhamba komsebenzi (bonelela abaphathi beentlanganiso, okanye iqela lentengiso ye-ops ukubanakho ukongamela zonke izicelo zentlanganiso kunye nokuqinisekiswa, ukuqinisekisa ukuba ulwazi olufanelekileyo lokuthengisa luyabanjwa, lawula amalungiselelo entlanganiso); kunye ne-post-meeting analytics (intlanganiso kunye nefuthe lemetrikhi zedashboard, ulawulo lophononongo ukuqonda ukusebenza kunye nenjongo yomthengi).
Imephu yeJifflenow yenzelwe injongo yodwa yokwenza ukuba ishedyuli isebenze kwaye ilawulwe yintlanganiso ye-B2B ebonakalayo okanye ngaphakathi. UJifflenow uya kukunceda uguqule ukusebenzisana kwakho kunye nethemba kunye nabathengi kwiintlanganiso ezinokuthi, ezinokukunceda ukuqhubela phambili umbhobho wokuthengisa kunye nokunciphisa umjikelezo wentengiso.
Funda ngakumbi ngeJifflenow
tags: Ukuthengisa kwe-b2bIinguqulelo zokuguqulai-covid-19ukuveliswa kwebangoiintlanganiso zesigqebamzantsiwebimephu yejefflenowisikhokelo sentengisointlanganiso esizisebenzelayomqlmqmundoku chaseneikhutshwaintengiso kunye nentengisoyokuthengisaiintengiso ezifanelekileyo zikhokelelasqlwebinar
URavi Chalaka yi-CMO ye- Jifflenow kunye neengcali zoPhuhliso noPhuhliso lwezoShishino, ezenza kwaye zenze izicwangciso zoshishino, ezivelisa iimfuno kunye nokuphakamisa ulwazi lwe-brand / product kwiimarike ezikhuphisanayo. Njenge-VP yeNtengiso kuzo zombini iinkampani ezinkulu nezincinci zetekhnoloji, uRavi wakha amaqela kunye neempawu ezomeleleyo kwaye wenza ukuba ukukhula ngokukhawuleza kwengeniso kuluhlu olubanzi lwezisombululo ezisekwe kwi-Big Data, i-SaaS, i-AI kunye nesoftware ye-IoT, i-HCI, iSAN, i-NAS. URavi uneziqu ze-MBA kwezokuThengisa nezeMali kwaye sisithethi seshishini esichazayo kunye nombonisi
I-GSTV: Abathengi ekujoliswe kubo kwiPump enamava asekwe kwindawo yeVidiyo
Iingcebiso ezi-5 zokujongana neMidiya njengoMthombo weNgcali